Fiteny iraniana - Wikipedia
Ny fiteny iraniana na fiteny iranika dia vondrom-piteny isan' ireo fiteny indô-eorôpeana, zana-pizaràn' ny sampana indô-iraniana. Ny vondrom-piteny iraniana dia ahitana indrindra ny fiteny avestika, ny fiteny persiana taloha, ireo fiteny iraniana maro notenenina nandritra ny Andro Antenantenany, ny fiteny persana ankehitriny, ny fiteny pastô, ny fiteny korda ary ny fiteny balotsy. Ny fitenin' ireo Skitiana sy ny an' ny Sarmatiana ary ny fiovan' ireo fiteny ireo amin' izao fotoana izao, ny fiteny ôseta tenenina ao Kaokazy, dia samy fiteny iraniana koa.
Ny toerana ahitana mpiteny iraniana dia tsy voafetran' ny tanin' ny Repoblika Islamikan' i Iràna fa mivelatra mankany amin' ny faritra Afovoany Atsinanana (ao amin' ireo faritra miteny korda ao Torkia sy Siria ary Iràka), ao Kaokazy (any Ôsetia sy ao amin' ireo faritra miteny tatô any Azerbaijàna), ary any Azia Afovoany (ao Iràna sy ao Afganistàna ary ao Pakistàna). Manampy azy ireo vahoaka mpifindra monina, indrindra ny Korda.
1 Fiteny iraniana be mpiteny
1.1 Ny fiteny zazaky
1.2 Ny fiteny ôsetiana
1.3 Ny fiteny lôry
1.4 Ny fiteny korda
1.5 Ny fiteny farsy sy ny fiteny dary ary ny fiteny tajiky
1.6 Ny fiteny pastô
1.7 Ny fiteny balotsy
1.8 Ny fiteny gilaky
1.9 Ireo endri-piteny taty na azary
1.10 Ny fiteny talisy
1.11 Ny fiteny mazandarany
Fiteny iraniana be mpitenyHanova
Ny fiteny zazakyHanova
Ny fiteny zazaky, izay atao hoe fiteny kirmanjky na kirdky na dimly na dimilky, dia fiteny tetenin'ny vahoaka zaza izay monina ao amin'ny faritr'i Dersim sy i Elâzığ ary i Diyarbakır ao Torkia. Isan'ny fiteny korda ny fiteny zazaky. Misy miteny azy koa ny ao amin'ny faritany sasany ao Kordistàna (ao atsimo). Maro ny toetra itovizan'ny fiteny zazaky amin'ireo fiteny ao amin'ny ranomasina Kaspiana toy ny fiteny talisy, ny fiteny gilaky, ny fiteny mazandarany.
Ny fiteny ôsetianaHanova
Ny fiteny ôsetiana na ôseta dia tetenin'ny vahoaka ôsetiana (na ôseta) izay monina indrindra ao Kaokazy indrindra ao Ôsetia (Ôsetia Avaratra sy Ôsetia Atsimo) any Jeôrjia. Mizara roa ny fiteny ôsetiana, dia ny fiteny irôna izay fiteny ampiasaina amin'ny haisoratra, sy ny fiteny digôa izay tenein'ny olona miisa 100 000 any ho any, Samy ampianarina sy soratana izy roa ireo.
Ny fiteny lôryHanova
Ny fiteny lôry na fiteny lory dia vondrom-piteny madinika ao atsimo-andrefana izay tetenin'ny vahoaka lôry sy ny vahoaka baktiary izay monina ao amin'ny faritany iranianan'i Lorestan, Ilam, Chahar Mahaal sy Bakhtiari, Kohkiluyeh ary Buyer Ahmad, sy ao amin'ny faritra sasany ao Khuzestan. Mitovitovy amin'ny fiteny korda io fiteny io.
Ny fiteny kordaHanova
Ny fiteny korda na kordy dia fiteny iraniana andrefana, tenenin'ny vahoaka korda (miia 44 000 000 any ho any) izay monina ao amin'ny faritra malalaka atao hoe Kordistàna, izay mizara amin'i Torkia afovoany sy atsinanana, ao avaratra-andrefan'i Iràna, ao Iràka atsimo ary ao Siria atsimo.
Ny fiteny farsy sy ny fiteny dary ary ny fiteny tajikyHanova
Ny fiteny farsy na persàna dia fiteny ôfisialin'i Iràna sy be mpiteny indrindra ao amin'io firenena io (ao afovoany, ao afovoany atsimo, ao avaratra atsinanana), ao Afganistàna ary ao Tajikistàna. Ahitana olona miteny azy koa ny ao Bareina, ny ao Katara, ny ao amin'ny Emirata Arabo Mitambatra. Endriky ny fiteny persàna isam-paritra koa ny fiteny dary (fiteny ôfisialy ao Afganistàna), ny fiteny tajiky (fiteny ôfisialin'i Tajikistàna) izay tenenina koa ao Kirgizistàna, ao Torkmenistàna, ao Ozbekistàna ary koa ao Kazakstàna.
Ny fiteny dary, izay atao hoe fiteny persàna afgàna na fiteny farsy atsinanana, dia endriky ny fiteny persàna (na farsy) teneina indrindraindrindra ao Afganistàna. Ny fiteny tajiky, na fiteny tôjiky, dia endriky ny fiteny persàna (na farsy) tenenina ao Tajikistàna. Mitovitovy amin' ny fiteny dary izay samy endriky ny fiteny persàna io fiteny io.
Ny fiteny pastôHanova
Ny fiteny pastô na pasto na patstô (arakaraka ny faritra) dia fiteny iraniana atsinanana izay tetenina ao Afganistàna (isan'ny fiteny ôfisialin'io firenena io, manampy ny fiteny persàna sy ny fiteny dary) sy ao Pakistàna sady tetenin'ny olona miisa 45 000 000 any ho any. Atao hoe Patstona na Pastona ny mpiteny pastô.
Ny fiteny balotsyHanova
Ny fiteny balotsy dia tetenina ao Balotsistàna (izay nozarain'i Iràna sy i Afganistàna ary i Pakistàna). Ahitana olona miteny azy koa ny ao Torkmenistàna sy ny ao Ômàna. Fiteny lavidavitra ny fiteny farsy ny fiteny balotsy. Misy ampahany be amin'ny mpiteny balotsy no miteny farsy ao Iràna sy ao Afganistàna ary ao Pakistàna.
Ny fiteny gilakyHanova
Ny fiteny gilaky, izay atao hoe fiteny gilany koa, dia fiteny ao amin'ny faritanin'i Gilan (na Guilan) ao Iràna. Miseho amin'ny endrika telo ny fiteny gilaky, dia ny fiteny gilaky andrefana sy ny fiteny gilaky atsinanana ary ny fiteny gilaky tabary. Akaiky dia akaiky ny fiteny mazandarany ny fiteny gilaky raha amin'ny lafiny voambolana fa akaiky ny fiteny zazaky amin'ny lafiny rafi-piteny. Miisa 3 600 000 any ho any ny mpiteny gilaky tamin'ny taona 1993.
Ireo endri-piteny taty na azaryHanova
Ny endri-piteny taty na azary dia fitambarana endri-piteny iraniana tetenina ao avaratra andrefan'i Iràna. Isan'ireo fiteny iraniana avaratra andrefana izy ireo. Ireo endri-piteny taty dia miparitaka amin'ireo faritra misy ny mpiteny azery ao Iràna. Tsy afangaro amin'ny fiteny taty izay tenenin'ny vahoaka taty ao Kaokazy ireto endri-piteny taty ireto.
Ny fiteny talisyHanova
Ny fiteny talisy dia fiteny tenenina ao Iràna, ao amin'ny faritra atsimon'ny ranomasina Kaspiana sy tenein'ireo Talisy ao Azerbaijàna.
Ny fiteny mazandaranyHanova
Ny fiteny mazandarany, izay atao hoe fiteny mazany na tabary na geleky, dia fiteny iraniana avaratra andrefana tetenina ao Iràna ao amin'ny faritanin'i Mazanderan. Mitovitovy amin'ny fiteny gilaky ny fiteny mazandarany, indrindra raha ny voambolana no heverina. Nisy 3 000 000 eo ho eo ny mpiteny mazandarany manao azy ho fiteny nibeazana tamin'ny taona 1993.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_iraniana&oldid=1045175"
Dernière modification le 15 Mey 2022, à 13:34
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2022 amin'ny 13:34 ity pejy ity.